Mee ọnụahịa na Comparison Chaatị dị ka Ninja | Martech Zone
Mee ricnye ọnụahịa na Comparison Chaatị dị ka Ninja
Wednesday, October 23, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
N'abalị ikpeazụ m wuru a ịnye ọnụahịa okporo na a ọhụrụ plugin anyị na-launching na odomo WordPress n'ime Email Marketing platform, CircuPress. Ọ dịghị atọ ụtọ ma ọlị (m na-eji) Onyinye efu na ntanye efu nke DreamCode n'omume) na ha ka kwesiri ka emezigharị ha iji hụ na ha na-anabata mkpanaka ekwentị na mbadamba.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ dị mfe iji wuo tebụl ntụnyere na grids ọnụahịa, lelee Tulee Ninja na Ọnụ Ninja. Onyinye abuo na-enweta ụfọdụ ndebiri ndebiri ga-enyere gị aka kụtuo iwulite ụfọdụ ọmarịcha grid na nkeji.
Nke a bụ ọrụ akwadoro, yabụ na ị naghị ewulite okporo ma detuo / mado koodu gị. Util na-eji snippet koodu ị na-atụdo na HTML gị (ma ọ bụ tebụl ID nke etinyere na ya WordPress shortcode site na ntinye) iji gosipụta grid gị na saịtị gị.
Uru nke Tulee Ninja na Ọnụ Ninja bụ ọsọ ị nwere ike ị nweta ụfọdụ grid ndị mara mma. Ekwesiri ighota na enwere oke na ihe i nwere ike ime site na njirimara ha. Na ngwụcha, anaghị m arụ ọrụ ahụ n'ihi na achọrọ m ịgbaso paịlị agba nke dabara na saịtị ahụ. Na n'ezie, ọ bụrụ na ọsọ na nkwụsi ike bụ isi, dabere na saịtị nke atọ iji gosipụta ọdịnaya gị nwere ike ọ gaghị abụ ihe ịchọrọ ịme.
Tags: tụlee ninjantụnyere okporontụle ntụnyereọnụahịa ninjaọnụahịa okporotable ọnụahịa
Nzube ahia gi adighi ka nke i chere
Chọghị Degree Business ka ị ghọta nke a